त्यो दिन संगै गएको साथीले खोले घटनाको बास्तबिक रहस्य : तर उनले मैले चिनेका मानिस छन् म बचाउँछु भनेर लिएर गएका थिए…. (भिडियो सहित) | भिडियो
त्यो दिन संगै गएको साथीले खोले घटनाको बास्तबिक रहस्य : तर उनले मैले चिनेका मानिस छन् म बचाउँछु भनेर लिएर गएका थिए…. (भिडियो सहित)
November 14, 2021 NepstokLeaveaComment on त्यो दिन संगै गएको साथीले खोले घटनाको बास्तबिक रहस्य : तर उनले मैले चिनेका मानिस छन् म बचाउँछु भनेर लिएर गएका थिए…. (भिडियो सहित)
काठमाडौं । कैलालीको टिकापुरमा केही दिन अघि भुपेन्द्र वडुवालको मृत्यु भयो । टिकापुर आसपासमा गु ण्डा’ग’र्दी गर्दै आएका दुई समुहबीचको विवादका कारण भुपेन्द्रको मृत्यु भएको हो । उनलाई फरक समुहका ब्यक्तिले खु’कु’री प्र’हा’र ग’रे’र ज्या’न लिए । सो घटनामा भुपेन्द्रसंगै रहेका उनका साथी दिपेश न्यौपानेले घटनावारे खुलाएका छन् ।
दिपेशका अनुसार, भुपेन्द्रले अन्तिम अवस्थामा फोन गरेर मलाई बचाउन आइज भनेर बोलाएका थिए । यो घटना योजनावद्ध रुपमा गराइएको थियो । लम्की चुहा नगरपालिका निवासी भुपेन्द्रको टिकापुरमा भएको घटनामा मृत्यु भएको थियो । भुपेन्द्रलाई जिममा गएर लिएर गएका थिए ।
त्यसपछि खाजा खान बसे तर भुपेन्द्रले आफ्नो घरमा खाना खान लिएर गएका थिए । त्यही बेलामा कपिल नाम गरेका एक जना युवकले राती फोन गरेर मलाई कर्णालीका केटाहरुले लखेटेको छ बचाउन आइज भनेर बोलाएपछि गएका थिए । तर त्यो उनीहरुको अर्कै योजना रहेछ । भुपेन्द्रलाई झुक्याएर बोलाएका रहेछन् । पछि उनीहरुले कपिललाई भेटे अनि उनले मनोज भन्ने आफ्ना मामालाई भने ।
दिपेशले यो रातिमा उनीहरुले बोलाएको ठाउँमा नजाउँ भनेर भनेका थिए । तर उनले मैले चिनेका मानिस छन् म बचाउँछु भनेर लिएर गएका थिए । तर उनीहरुले योजना अनुसार झुक्याउँदै शिव मन्दिरको बाटो हुँदै केरावारीमा पुगे । त्यहाँ कपिलले भनेको लोकेशन नै फेला पारेनन् । उनी फर्कन लागेको बेलामा केरावारीमै अर्को समुहका युवाहरुले घेरा हालेर प्र’हा’र ग’रे ।
निधारमा टिका लगाउनुको अध्यात्मिक एवम् बैज्ञानिक महत्व जान्नुहोस् :
वायुसेवा निगमका पूर्वअध्यक्षको निधनको कारण खुल्यो
श्रीमानले सौता ल्याएर घरमा भित्राए,सासू र नन्दले कु टेर घर निकाला गरेपछि उनी रु दै भौतारिएकी छिन् (भिडियो हेर्नुस्)
विवाह गरेजस्तो गरि बेच्न खोज्दा भागेर बाँचिन्,यस्ता महिला तस्करको बिगबिगी छ नेपालमा (भिडियो हेर्नुस्)